Emeputa na soplaya nke nnyefe Ngwaahịa, Bevel Gear: EVER-POWER PTE. LTD
R usoro helical gia reducer
Singapore Ever nnyefe ike Pte.Ltd.
R107 / RF107 / RS107 / RF107 usoro helical gia reducer nwere njirimara nke ike egosipụta ọtụtụ, ezi Nchikota na ike na-ebu ikike. Ọ nwere uru nke nnyefe nnyefe dị mfe, arụmọrụ dị elu, obere mkpọtụ na nnukwu ibu radial nke osisi. Enwere ike ọ bụghị naanị iji usoro a na ndị na-ebelata ihe dị iche iche na igbe gearbox iji mezuo ihe achọrọ, kamakwa ịkwado mpaghara nke akụrụngwa gearbox metụtara.
High modular imewe.
Ihe odide a na-atụgharị azụ nwere oke nha, ibu dị elu na-ebu ikike, nnyefe kwụ ọtọ na obere mkpọtụ.
Ezi mgbochi leakage arụmọrụ, ezi akara, nwere ike-n'ọtụtụ ebe na ulo oru mmepụta.
Ike oru oma.
Efu ego na ụgwọ mmezi dị ala.
Anyị na-enyekwa mma kacha mma qualitydọrọ agbụ. Ngwaahịa ndị a nwere ike zuru oke iji dozie ikike ibu dị arọ ma tinye n'ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe. A na - emepụta ngwaahịa ndị a site na iji ezigbo akụrụngwa dị mma ma dị n'ọtụtụ nkọwa maka ndị ahịa anyị a ma ama. Ndị ahịa anyị bara uru nwere ike inweta ngwaahịa ndị a na ọnụahịa kacha mma. Anyị bụ ndị a na-asọpụrụ Dragging yinye Manufacturer na Supplier ma hụ na anyị Dragging yinye mgbanwe na-eji na mfe jikọọ.
Na-achọ ndị nrụpụta kachasị mma na ndị na-ebu ngwaahịa ngwaahịa nnyefe ike? Are nọ n’ebe kwesịrị ekwesị. Na-ebunye ike Pte. Ltd bụ otu n’ime ndị na - eweta ngwaahịa nnyefe ike na China. Anyị na-enye a dịgasị iche iche nke nnyefe ngwaahịa dị ka kwa ahịa chọrọ dị ka yinye sprocket, belt, pole, gia, ogbe, gearbox, moto, na ọtụtụ ndị ọzọ na ike nnyefe ngwaahịa. OEM ase na-anabatakwa anyị nwere ike ime ka akụkụ pụrụ iche chọrọ: yinye sprocket, belt, pole, gia, ogbe, gearbox, moto, na ọtụtụ ndị ọzọ ike nnyefe ngwaahịa. OEM ase na-nnọọ na anyị na-enwe ike ime pụrụ iche akụkụ…
Na-ebunye ike Pte. Ltd. bụ ụlọ ọrụ onye ndu nke emebe na injinịa nke dị iche iche nke ike nnyefe ngwaahịa. Na-arụ ọrụ ọtụtụ afọ, anyị nwere aha ọma na ụlọ ọrụ a ma na-enye ọkwa kachasị elu nke ngwaahịa nnyefe nke a na-ejikwa ya n'ụwa niile. Anyị na-eji teknụzụ kachasị ọhụrụ na ngwaọrụ iji mepụta ngwaahịa dị elu nke na-eme ka arụmọrụ na arụmọrụ ka mma. OEM ase na-anabatakwa anyị na-enwe ike ime ka akụkụ pụrụ iche chọrọ: yinye sprocket, belt, pole, gia, ogbe, gearbox, moto, na ọtụtụ ndị ọzọ na ike nnyefe ngwaahịa.
Dị ka onye na-ebu ndị na-ebu ihe na onye na-eweta ngwaahịa, anyị na-enyocha engineer Conveyor nke nwere ogo dị elu site na iji teknụzụ nke oge a na ígwè ọrụ iji nweta ihe ndị ahịa chọrọ. N'ihe ka ukwuu, mmezu pụtara ìhè, mmezi na-adịghị, ogologo oge, na ikike dị elu, anyị na-enye ndị na-ebugharị ngwa ngwa kachasị mma nke nwere ike imezu ọchịchọ gị. Naanị ihe ị ga-eme bụ ka ndị ọkachamara anyị mara banyere nkọwa gị, anyị ga-eme otu ihe ahụ. Ogo nke ụlọ ọrụ ndị na-eji ihe ndị na-ebugharị anyị dịka ciment, shuga, fatịlaịza, ibu, nhazi nri, gas na mmanụ, na ụlọ ọrụ na-ejikwa ihe onwunwe.
Ebee ka a na-ebupụ ngwaahịa gị?
AAnyị na ngwaahịa na-tumadi exported na Japan, na United States, Germany, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mba ndị ọzọ na mpaghara. Ndị ahịa anyị gụnyere ọtụtụ ndị ahịa OEM bụ ndị ọkachamara n’ihe eji arụ ụlọ. Anyị esorola ọtụtụ ụlọ ọrụ Fortune 500 rụkọọ ọrụ iji bụrụ otu n'ime ndị na-ebubata ngwa ahịa ndị na-emepụta ihe na China.
Esi enye ngwongwo?
AAnyị na-ebubata ngwongwo anyị n'oké osimiri. Lọ ọrụ a dị naanị kilomita 460 site n’ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ọ dị ezigbo mma ma dabara adaba ibufe ngwongwo na mba ọ bụla. N'ezie, ọ bụrụ na ibu gị dị ezigbo mkpa, ọdụ ụgbọ elu Ningbo na ọdụ ụgbọ elu Shanghai dịkwa nso.
Kedu otu esi achọpụta ogo ngwaahịa gị?
ANke mbụ, anyị ga-elele mgbe usoro ọ bụla. Maka ngwaahịa ndị gwụchara, dịka ihe ndị ahịa chọrọ na ụkpụrụ mba ụwa si dị.
The ụlọ ọrụ specializes na-amị R usoro helical gia ike eze ezé elu reducer, S usoro helical gia irighiri reducer, F usoro yiri aro helical gia reducer, K usoro helical bevel gia reducer, T usoro helical bevel gia n'iru igbe, H, B usoro elu- ike ulo oru gia igbe, SWL usoro ikpuru wheel na ịghasa mbuli, ZLYJ usoro extruder. Igbe siri ike pụrụ iche, usoro G nke ejiri ihe eji arụ ọrụ, P usoro ihe eji arụ ọrụ ụwa, usoro ZDY usoro bevel gear reducer na ihe karịrị usoro iri, ọtụtụ narị ụdị, ọtụtụ puku nkọwa nke ngwaahịa, ma nye ọkachamara ọkachamara abụghị ọkọlọtọ ngwaahịa na nhazi. N'otu oge ahụ, a na-anakwere atụmatụ atụmatụ modular nchikota iji mee ka ngwaahịa a nwee ọtụtụ ihe eji eme ihe iji zute ngwa dị iche iche.